HAIN-TRANO TAO 67 HA : Nihazakazaka nitondra fanampiana ny fitondram-panjakana
Noho ny hain-trano nitranga ny alin’ny 03 marsa teo teny 67 ha afovoany andrefana dia tonga nanatanteraka ny voin-kava mahatratra, ka nitondra izay voatsirambin’ny tanana, amin’ny alalan’ny Fitondram-panjakana, izay avy amin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimam-pianina ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra Lehibe ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, ny sabotsy teo. 6 mars 2017
Nanotrona azy tamin’izany ny mpikambana maromaro ao amin’ny Governemanta izay tarihiny, ka anisan’izany ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Jean Anicet Andriamosarisoa. Trano lay, vary 1 taonina, voamaina 10 lasaka, fanitso 100, bodofotsy, fitaovan-dakozia no fanampiana noentin’ny fitondram-panjakana.
Nanambara ny Praiminisitra fa “tsy mijery fotsiny ny fitondram-panjakana fa tonga rehefa antsoina andro sy alina vao maheno ny voina misy”. Raha ny nambaran’ny Sefo Fokontanin’ny 67ha afovoany andrefana, Ranaivo Gégé dia mahatratra 129 ny tra-boina, ka 8 ny trano hazo ary 11 kosa ny trano biriky. Tsy misy ny aina nafoy na ny naratra tamin’ity voina ity.
Tamin’ny firesahany tamin’ny mpanao gazety mikasika ny hafatra nataon’ny sojabe avy any Sofia no nilazan’ny Praiminisitra Mahafaly Olivier hoe « henoko ny feo avy amin’ny sojabe avy amin’ny Faritra Sofia fa tsy hiteny zavatra firy ny tenako fa raiamandreny izy ireo ary rai amandreny koa ny tenako, ary tsy hamaly na dia teny iray aza fa amiko ny sojabe dia raiamandreny natao hananatra, natao hampihavana fa tsy natao hampisara-bazana”. Nasian’ingahy Mahafaly Olivier resaka ihany koa ny raharaha Befandriana Avaratra, ka tamin’izany no nanam- barany fa na tsy teto an-tanindrazana aza izy tamin’ireny fotoana ireny dia misy hatrany ny firaisankina eo anivon’ny Governemanta. Nifandray tsy tapaka tamin’ny minisitra mpisolo toerana ny tenany hoy izy ka niarahana avokoa ny ezaka natao mikasika an’ny Befandriana avaratra. “Efa nisy ny fidinana tany an-toerana nitondrana fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana toa ny lay, ny vary sy ny maro hafa izay efa nentina tany Antsohihy.
Niarahana nanapaka koa ny “commission mixte” izay nanao ny fanadihadiana tany an-toerana”, hoy izy hatrany. Araka ny tatitra nomen’ny minisitry ny Filaminana anatiny vaovao taminy, hoy Mahafaly Olivier, dia efa azo ny vokatry ny fanadihadiana natao fa mbola tsy azo avoaka noho ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana.
Tany lavitra andriana
“Efa mieritreritra ny hidina any Antsakabary ny Filoham-pirenena amin’ny herinandro ambony hijery ifotony ny zava-misy sy hankahery ireo olona. Hijery izay fotoana mety araka izany ny Filoham-pirenena na ny tenako amin’izany fidinana ifotony izany. Nandray andraikitra ny fitondrana tamin’ny resaka Antsakabary ary nisy ny firaisankina tamin’ny fandrindrana ny asa natao fa tsy natao an-kilabao”, hoy Mahafaly Olivier.
Fantatra fa efa maherin’ny 10 andro no nisy nandoro ny tanàna miisa 5 ao Befandriana Avaratra nefa mbola mireritreritra ny hidina any an-toerana ny Filoha Hery Rajaonari- mampianina sy ny Praiminisitra Mahafaly Olivier. Dia mbola sahy milaza izy ireo fa akaikin’ny vahoaka hatrany ary tonga rehefa antsoina. Sa tany lavitra andriana i Befandriana Avaratra ka tsy raharahiana.